Polyester Taffeta ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ | တရုတ် Polyester Taffeta စက်ရုံ
ပုံမှန် Polyester Taffeta
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည်ပုံမှန် Polyester Taffeta 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Stone ရေချိုး Polyester Taffeta
Care Label ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ကျောက်ဆေး Polyester Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
ကျောက်ဆေးခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်း Polyester Taffeta
Care Label Printing အတွက်ကျောက်ကပ်ဆေးကြောခြင်းနှင့်အပူဆိုးပြောင်းခြင်း Polyester Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Full- မှိုင်း Polyester Taffeta
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အပြည့် - မှိုင်း Polyester Taffeta 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
အထူ Polyester Taffeta
Care Label Printing အတွက်အထူထူသော Polyester Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
အရောင်များကိုကျောက်ဆေးခြင်းနှင့်အပူဆိုးလွှဲပြောင်းဆေးကြောခြင်း Polyester Taffeta
ဆေးကြောခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်းအပြင်အပူလွှဲပြောင်းမှု Polyester Taffeta 1. Care Label Printing အတွက်။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Micro-Fiber Polyester Taffeta
Care Label Printing အတွက် Micro-Fiber Polyester Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
အနက်ရောင် Polyester Taffeta
Care Label Printing အတွက်အနက်ရောင် Polyester Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
လွယ်ကူသောမျက်ရည် Polyester Taffeta
Care Label Printing အတွက်လွယ်ကူသောမျက်ရည် Polyester Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Tearable ပုလဲ Grey က Polyester Taffeta
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည် Tearable ပုလဲ Grey က Polyester Taffeta 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။